Foomka Cabashada COVID-19
Foomka Cabashada COVID-19 waxaa loo adeegsadaa haddii aad uga baahan tahay caawimaad dhibaato la xiriirta COVID-19 sida khayaanada, khiyaanooyinka caafimaadka la xiriira (bogsashada mucjisooyinka, alaabada, ama daweynta), ku-simaha dowladda iyo khiyaanooyinka gargaarka lacageed, dambiyada internetka, dambi lacageed, danbi nacayb, ama dano kale oo la xiriira sharciga madaniga ama dambiyada.
Xafiiska Minnesota Attorney General wuxuu isku dayi doonaa inuu ka caawiyo wax ka qabashada waxyaabaha aad ka welwelsan tahay, haddii aan u maleynno inay ku caawin karno.
Haddii aad uga baahan tahay caawimaad arrimaha macaamiisha guud, oo aan ku xirnayn COVID-19, fadlan isticmaal Consumer Assistance Foomka.
Ciwaankaaga (sadarka 2)
Koodhka boostad *
Arrinta ka Cawday
Magaca Shirkadda ama qofka *
Shirkadda ama cinwaanka waddada qofka
Shirkadda ama cinwaanka waddada qofka (sadarka 2)
Ma la soo xiriirtay hay’ad kale? *
Hay’adda aad la xiriirtay
Natiijada hay’adda la xiriirka
Ma gudbisay dacwad sharci ah? *
Lambarka faylka maxkamadda
Maxsuul maxuu ahaa?
Sheyga, Adeeg, ama lacag bixinta (hadee ee jirto)
Qiimaha ($ USD)
Sharraxa iyo xallinta
Sharrax dhibaatada *
Caawimaad nocee ah ayaad u bahaan tahay? *
Fadlan bixi wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan arrintan.